Erdoganka Turkiga oo wajahaya loolan adag - BBC News Somali
Erdoganka Turkiga oo wajahaya loolan adag
Iyadoo uu xilliga guga uu gabagaba yahay ,ayaa xiisadda siyaasadeed ee ka jirta degmada Besiktas ee magaalada Istanbul waxaa laga dareemayaa ololaha doorashooyinka ku soo foodleh dalka Turkiga.
"Waa in aan xarumaha lagu codbixinayo aan xirnaa 8da fiidnimo" ayuu yiri qof mar uu sii galaayey teendho." Balse waxa hadda jira dadaalo badan marka waxa laga yaaba inan halkan joogno ilaa 11ka habeennimo"
Mucaaradka ayaa ku dooday in ay jirto ka go'naansho la'aan in la qabto doorashadaas .
Soo if bixista haweenayda 'shabeel-gabdhoodka' ah
"Haweenaydan ma ahan qof musuqmaasuq abid lagu soo eedeeyey ama wax xatooyo ah" ayey tiri Ms Ulucay l
"Lix bilood gudahood , saameynta sicirbararka ayaa la dareemi doona" ayuu yiri Prof Ozel. Balse haddii ay mucaaradka ay soo jeediyaan ama dadka ka dhaadhiciyaan inay si wanaagsan u maareyn karaan dhaqaalaga ,waxa laga yaaba inuu guddiga doorashada uusan sameyn doonin wax isbadel ah. Su'aasha ayaa ah inay daacad u sii ahaan doonan iyo in kale."